कसरी एक cam केटी हुन
एक वेबक्याम केटी बन्नुहोस्। प्रति हप्ता $ 500 बाट कमाउनुहोस्। कुनै पनि समय, कहिँ पनि।
तपाईंको स्ट्रिम सुरू गर्नुहोस्
वेब क्याम मोडलि job काम
Flirtymаniа एक स्वतन्त्र वेबक्याम साइट हो। क्याम केटीहरूले सबै भुक्तानी प्राप्त गर्दछ, कुनै एजेन्सी वा मध्यस्थ आवश्यक पर्दैन। कुनै सीभी वा अन्तर्वार्ता छैन - तपाईं आफ्नो आय नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। अनुप्रयोग मोबाईल सहित सबै लोकप्रिय प्लेटफार्महरूमा १ languages भाषाहरूमा उपलब्ध छन्। आईफोन, एन्ड्रोइड वा तपाईंको पीसी मार्फत स्ट्रिम गर्नुहोस्। दर्शकहरूको लागि कपडा उतार्न सबै आवश्यक छैन।
एक सफल क्यामेरा केटीको प्रति हप्ता आय।
तपाइँ स्ट्रीमिंग सुरू गरेको पहिलो दोस्रो पैसा कमाउनुहुन्छ। तपाईंको दर्शकहरू जति सक्रिय छन्, तपाईंको अन्तिम आय बढि छ।
तपाईंलाई धन्यबाद दिन, दर्शकहरूले तपाईंलाई १ क्लिकमा सिक्का पठाउन सक्दछन्।
नि: शुल्क दान
कुनै पनि सेवा को लागी तपाइँ दान स collect्कलन गर्न र आयोगहरु बिना एक इनाम प्राप्त गर्न को लागी सुविधाजनक उपयोग गर्नुहोस्।
तपाईंको प्रोफाइल निष्क्रिय आय को एक स्रोत हो। फोटो र भिडियो पोष्ट गर्नुहोस्, रसीला विवरणहरू थप्नुहोस् र दृश्यहरू स collect्कलन गर्नुहोस्।
प्रयोगकर्ताले तपाईंको फोटो वा भिडियोको प्रत्येक दृश्यको लागि भुक्तान गर्दछ; प्रत्येक views० दृश्यहरू हाम्रो सेवा द्वारा भुक्तान गरिन्छ।
सामाजिक नेटमा वेबसाइट लिंक साझेदारी गर्नुहोस्, यसलाई तपाईंको वेबसाइटमा पोष्ट गर्नुहोस् वा तपाईंको साथीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पठाउनुहोस्। यस तरिकाले तपाईले व्यस्त दर्शकहरूको खरीदबाट रूचि प्राप्त गर्नुहुनेछ।
अनलाइन फ्लर्ट ड्यासबोर्ड
तपाईंको स्ट्रिमको लागि एक विषयवस्तु छनौट गर्नुहोस्। फ्लोर्मिनिаले थिमेटिक स्ट्रिमहरूलाई यसको निर्मित कार्यात्मकमा धन्यवाद दिन्छ। क्यामेराको अगाडि के गर्ने भनेर चिन्ता गर्ने ठाउँ छैन! विषयवस्तु र गतिविधिहरू छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईं सिक्काका लागि प्रदर्शन गर्न तयार हुनुहुन्छ। ड्रेस कोडको अनुसार पोशाक सिर्जना गर्नुहोस् र तपाईंको फ्यानहरूसँग पैसा च्याट गर्न पैसा कमाउनुहोस्। दर्शकहरूलाई तपाईंको कार्यक्रम निर्देशित गर्न दिनुहोस्।
नियमित कसरत गर्न समय छैन? योग वा पाइलेट्स गर्दा सिक्का कमाउने प्रयास गर्नुहोस्!
तपाईंको दैनिक जीवनको अनावरण गर्नुहोस्, तर तपाईंको फ्यानहरूको मनोरञ्जनका लागि आनन्ददायक बनाउनुहोस् - तपाईंको दर्शकहरूले अनुरोध गरेको कार्यहरू गर्नुहोस्!
मिठो दाँत छ? केक र कुकिजको साथ आफैलाई व्यवहार गरेर सिक्का कमाउनुहोस्! दर्शकहरूलाई देखाउनुहोस् तपाईंको कार्ब कति मनपर्दछ!
आरामसँग कुराकानी गर्नुहोस्
Flirtymаniа मा एक स्ट्रिम दुई क्लिक मा सुरू गर्न सकिन्छ। प्रयास गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् कति सजिलो छ!
तपाईंको मातृभाषामा विदेशीहरूलाई लेख्नुहोस् र निर्मित स्वत: अनुवादकले बाँकी काम गर्दछ।
वेबक्याम सेवाहरूको संयोजन
काम गर्नुहोस् र एकै समयमा धेरै साइटहरू र उपकरणहरूमा कमाउनुहोस्। यो पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ।
न्यूनतम फिर्ता रकम $ 30 हो। VISA, Mastercard, PayPal, Yandex, QIWI, SEPA, Bitsafe सेवाहरू प्रयोग गर्नुहोस् वा पैसा निकाल्नको लागि चलानी प्राप्त गर्नुहोस्।
चार्जब्याकहरू बिना भुक्तान गर्दै। १००% आय प्राप्त गर्नुहोस्, Flirtymаniа फिर्ताको फिर्ता लिन्छ।
गुमनाम रहनु धेरै केटीहरु को लागी धेरै महत्वपूर्ण छ। Flirtymаniа को साथ तपाईं अज्ञात स्तर रोज्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं धेरै सहज हुनुहुन्छ। केही खास प्रयोगकर्ताहरूलाई ब्लक गर्न र विशेष देशहरूलाई कालोसूची गर्नको लागि केवल गोपनीयता सेटि theहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाइँको भेषमा अन्तिम टचहरू थप्नुहोस् - एक असामान्य उपनाम (जसले तपाइँको पहिचान लुकाउँछ) र एक उत्तम स्टाइलिश मास्क छान्नुहोस्।
विश्वास गर्न सक्दैन कि यो यति सजिलो छ?
यसलाई जाँच गर्नुहोस् र आज कमाउन शुरू गर्नुहोस्!